Kedu ka esi mee curls mara mma?
Anie ke otu nnyịn ikenen̄ekede nditịn̄ ke nditọiban emi ẹdude ke ufọk-n̄kpọkọbi emi mînyeneke nditiene mmọ? Ma eleghị anya, ọbụna ndị nwere ntutu isi adịghị-ee, ma na-echekwa otú ha ga-esi jiri nwayọọ na-etinye curls ha. Ndị a na-enwe obi ụtọ nwere obere ọrụ na ezigbo ụdị curls - ihe bụ isi mgbe itinyechara ngwaahịa ahụ maka ịkpụcha na ihicha, mee ka mbo ahụ dị ntakịrị ka o kwere mee. Ọ ka mma iji aka gị mepụta onye na-acha ntutu isi - mgbe ahụ, "isi iyi" agaghị adaba ma jiri nwayọọ mee ka onye nwe gị mara mma. Ma ndị na-ebu ntutu isi ga-arụ ọrụ siri ike ịmepụta curls mara mma n'ụlọ.
Mana tupu ị ghọtara na otu esi esi mee curls mara mma, ị ga-achọ ịma ụdị nsonaazụ ị chọrọ: nnukwu curls, obere curls, ma ọ bụ na ịchọrọ ịpịgharị obere ringlets iji mee ka edozi isi. N'ebe a, ọ dị mkpa ịmalite site n'ọdịdị ọdịdị nke mbụ. Ọ bụrụ na ọdịdị ihu gị buru ibu, mgbe ahụ, ọ ka mma ịchọta curls buru ibu, yana obere atụmatụ ị nwere ike ịnwa ịmegharị ọsọ dị ka obere osisi, ha kwesịrị ịma mma. Ọfọn, n'ụdị ntutu ị ga-ahọrọ, kwa, ị kwesịrị ịṅa ntị: obere curls dị mfe iji na ntutu dị mma, nnukwu isi nke na-anụ olu ga-anakwere nnukwu curls.
Nchọgharị dị mma n'ime ụlọ
Ọ dị mma ịmegharị - nke a bụ ezigbo nkà na onye kasị mma ịgwọ ya, ọ bụghị ọkachamara? Ma ọbụnadị na ị gaghị aga salons, ị nwere ike imeta nanị mmetụta dị ịtụnanya, ihe bụ isi bụ inwe ndidi ma nweta ngwá ọrụ ndị dị mkpa. N'okwu a siri ike, ndị na-eme nri dị mma ga-abụ ndị na-emegharị ihe, na-emegharị ihe, na-edozi ígwè, foam (gel) maka imepụta ihe, na ndị na-akwa mmiri nke ike.
Kedu ka esi mee curls mara mma n'ụlọ?
Onye a ma ama ma eleghị anya ụzọ kachasị mfe iji nweta ntutu isi dị elu bụ ịkpụ ntutu isi gị na ntutu isi. Isi ihe icheta bu na tupu igbanye ntutu isi kwesiri ikpocha ma mesoo ya ihe di iche iche. Ma ọ bụghị ya, n'ezie, na iji oge a eme ihe, ị na-eche na ị na-agbaji, na-agbaji ma na-ada mbà. Ebe ị na-eme ka curls dị gị mkpa iji dozie ha, ntutu isi ga-achọ ya ntakịrị, mana ndị nwere isi ụda nke ịnụ ihe ga-eme ka ọ ghara ịdị na-eme ka ike gwụ.
Kedu ka esi mee ka ihe nkedo na-acha mara mma?
Ọ dịghị mkpa iche na ntutu isi na-adabara naanị maka ịgbatị ha, ha nwere ike mee ngwa ngwa na-eme ka ọkpụkpụ mara mma na ntutu, ogologo dị n'okpuru ubu. N'ịkwadebe ntutu maka ọrụ na ígwè, ọ dị mkpa ịghọta otu mkpọchi ntutu na isi. Na-esote, kechie ntutu isi 1 na ala nke na-agbazi. Mgbe ahụ, anyị na-awụnye ígwè ahụ, na-agbada, na-ejide mkpọchi na aka aka. Ejighi echefu ihe na-eme ka ọ ghara idozi ya na lacquer. Mgbe ị na-eji ígwè na-eme ihe n'otu ụzọ ahụ dị ka nke na-eji ígwè ígwè, echefula banyere iji nchekwa nchedo. Ntutu isi n'ihu ikpochapu ga-akpọnwụ, ọ gwụla ma ọ bụ na e nweghị ígwè gị iji rụọ ọrụ na ntutu ntutu.
Kedu otu esi eme ka curls na-eji curlers?
Ugbu a, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị na-eme njem nlekọta - site na nro dị na cubes cubes, ọ dịkwa gị mkpa ịhọrọ ndị ziri ezi dabere na ihe mgbaru ọsọ gị. Nke mbụ, anyị na-ekpebi ihe anyị chọrọ inweta curls. Enwere ọchịchọ inwe isi isi iyi mmiri dị n'isi gị? Mgbe ahụ, ịchọrọ ịhọrọ obere curler, dị ka bobbins. Ị chọrọ ịnweta nnukwu curls? N'ihi ya, anyị na-eji ngwá ọrụ buru ibu. Na-eburu n'uche oge anyị ga-eji na-edozi isi. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ijikwa ngwa ngwa, nyezie ndị na-agba ọsọ na ifufe na ha tupu ị lakpuo ntutu isi mmiri. N'ụtụtụ, ọ ga-adị mkpa ịkwasịa curls na ntutu (na-ejighị eriri ahụ, ma e wezụga obere ka ịchaa ntutu) ma fesa ya na varnish. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ihe dị ka ọkara elekere iji wuo edozi, anyị na-ewere ntutu isi, ntutu isi na ha na-edebe ha maka nkeji 20. N'eziokwu, ha anaghị enwe ike iji ya mee ihe kwa ụbọchị, anyị na-eji ndị na-eme nri na-emegharị ahụ, na-agbanye ha na ntutu isi.
Ịcha mma nke ponytail
Na-etinye ntutu isi n'ụlọ
Ịcha ebe n'elu osisi ahụ
Gbanyụọ ntutu - ihe ị ga-eme?
Avocado mmanụ maka ntutu
Mmiri mmiri maka ntutu
Ịcha ntutu na pawuda
Ọkpụkpụ ntutu isi na ntutu isi
Masks maka ntutu isi dị n'ụlọ
Akwụsị na-acha laser nke armpits
Nkpu maka isi na vitamin
Ntutu isi "Malvinka"
Nkpu maka isi na nicotinic acid
Hazie usoro n'usoro ihe niile
Ọkpụkpụ Polidex Na-agba
22 ndị na-eto eto bụ ndị gosipụtara na ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike ihi ụra n'ebe ọ bụla
Otu esi echekwa mkpụrụ na ulo - ụzọ kachasị mma iji chekwaa ngwaahịa bara uru
Olee otu esi eme ezigbo nwunye?
Ngwa ndị bara uru maka ọnwụ ọnwụ
Olee otu esi azụlite nwatakịrị?
Nhazi windo - ákwà ngebichi
Nwanya na-ekpo ọkụ ndị inyom zuru ezu
Omelet na akwukwo nri
Pyeloectasia na nwa amụrụ ọhụrụ
Megan Markle mebiri nkwekọrịta ahụ maka ịgbazite ụgbọ ala dị oké ọnụ ahịa na Toronto n'ihi ịkwaga London
Robbie Williams kwupụtara ọkwa nke ọba ọhụrụ ahụ, gbagoo n'osisi
Ụcha ọcha maka ntutu
Kedu mgbe m nwere ike inye nwa ahụ àkwá?
Nurin ị na-agakarị na ụmụaka
Mike-egbu egbu - gini kpatara a kpọrọ?
Biseptol maka ụmụaka
Mara mma Jaketị
Kedu ka esi arịọ mgbaghara?
Imecha ụlọ dị n'ime ime ụlọ ịwụ - imepụta echiche ndị ga-enyere gị aka ịhọrọ nhọrọ kacha mma